Somali - Soomaali : VicRoads
Ku wad macluumaadka imtixaanka oo af Soomaali ah
Waxa aad u baahan tahay in aad latimaadid ballantaada
Isticmaalka turjumaan ama Af-celiye
Imtixaanka Ogolaanshaha (learner permit) Ardayga Qof ahaan
Imtixaanka Garashada Khatarta Shaqsi ahaan
Xidhiidh waxtar leh
Waxaad ka heli doontaa macluumaad boggan ku saabsan waxaad u baahan tahay inaad latimaadid Imtixaanka Oggolaanshahaaga Barashada (Learner Permit) wadida gaadiidka, Imtixaanka Barashada Khataraha wadida gaadiidka ama Ballanka Imtixaanka W ee Xarunta Adeegga Macmiilka (Customer Service Centre).
Haddii aad u baahan tahay inaad nagulu hadashid luqad aan Af-Ingiriisi ahayn, waxaad wici kartaa turjumaan ama Af-celiye si laguu caawiyo.
Sideen u isticmaali karaa turjumaan?
Haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo samaynta ballan ama buuxinta foom, waxaad caawimo ka heli kartaa qoyskaaga, saaxiibbadaada ama xafiiska VicRoads office.
Haddii aad u baahan tahay turjumaan ama caawimo si aad ugu fadhiisatid imtixaanka VicRoads test, waxaad u baahan doontaa inaad booqatid Xarunta Adeegga Macmiilka (Customer Service Centre) ee VicRoads (External link) waanad ka ballansan karnaa halkan.
Duruufaha aafeeya hadalka iyo maqalka
Haddii ay kuhayso dhibaato xagga hadalka ama maqalka ah, waxaad adeegsan kartaa turjumaan Auslan imitixaankaaga.
Si aad nagula hadashid taleefanka, nagala soo xidhiidh Adeegga Gudbinta Qaranka (National Relay Service (External link)).
Isticmaalayaasha TTY - wac 13 36 77 kadibna weydii 13 11 71
Isticmaalayaasha Hadalka iyo Dhageysiga - wac 1300 555 727 kadibna weydii 13 11 71
Turjumidda liisankaaga darawalnimada, oggolaanshaha barashada (learner permit) wadida gaadiidka ama waraaqaha
Haddii liisankaaga darawalnimada ama oggolaanshaha barashada (learner permit) aaney ku qorneyan Af-Ingiriisi, waa inaad ku turjumtaa tarjumaan kasta oo laga aqoonsan yahay NAATI (External link), ama qunsuliyad ku habboon Australiya.
Khidmadaha ayaa laga yaabaa in la codsado.
Ruqsadda Wadista Caalamiga ee hadda jirta ayaa sidoo kale laga yaabaa in la aqbali karo marka la turjumo liisanka darawalnimada ee dibedda.
Ruqsadda Wadista Caalamiga ah waxay u baahan tahay in laga bixiyo waddanka liisanka darawalnimada ee dibedda lagu soo saaray.
Turjumaano iyo Af-Celiye lagu taliyay
Waxaan ku talinaynaa turjubaannada NAATI ee soo socda:
Loop Language (External link) - wac (03) 9280 0783 ka dibna weydii 13 11 71
All Graduates Interpreting and Translating Services (External link) - wac (03) 9605 3050 ka dibna weydii 13 11 71
Adeegyada OnCall Language Services (External link)
Ha iloobin inaad keentid:
Nuqul ka mid ah xaqiijinta ballankaaga ee kor ku xusan.
Tan waxaa lagu daabici karaa ama lagu tusi karaa taleefankaaga.
Ruqsadda oo dhammaystiran ama arjiga oggolaanshaha barashada (learner permit) PDF
Caddayntaadii hore ee aqoonsiga
Caddayn inaad ku nooshahay Fiktooriya
Haddii aadan haysan wax caddayn ah cinwaankaaga Fiktooriya (tusaale, bayaan bangi, biilka korontada ama heshiiska kirada), hubi inaad heshid qof saxeexa caddaynta deganaanshaha Fiktooriya ee foomka codsiga liisanka.
Liisankaagii asalka ahaa ee dibadda
Turjubaan Af-Ingiriisi NAATI oggolaatay oo liisankaaga ama oggolaanshaha wadista caalamiga ah (kaliya ayaa loo baahan yahay haddii liisankaaga dibedda aaney ku qornayn Af-Ingiriisi)
Muraayadahaaga araga ama kontaga indhaha (haddii aad u baahan doonto inaad ka gudubtid baadhitaanka aragga)
Warbixin kasta oo caafimaad (haddii aad qabtid xaalad caafimaad ama aad qaadatid dawooyin laguu qoray oo saamayn kara awooddaada baabuur wadista)
Bixinta khidmadaha loo baahan yahay
Sida loo diyaariyo imtixaannadaada
Akhri road to solo driving handbook ama qaado imtixaan baaktiiska ah.
Sida aad wakhti cusub u bedeli kartid ballantaada
Haddii aad u baahan tahay inaad ballantaada u beddeshid waqti cusub, ogeysiis 24 saacadood ah ayaa loo baahan yahay oo ay la socoto lacag bixin.
Marka ballanka la ballansado, waxaa beddeli kara oo keliya qofka leh ballanta.
Xaalad caafimaad ma qabtaa?
Haddii aad qaadatid dawooyin laguu qoray ama aad qabtid xaalad caafimaad oo saamayn ku yeelan karta kartidaada baabuur wadista, waxaad u baahan doontaa inaad noo sheegtid oo aad na siiso warbixinno caafimaad oo khuseeya.
Hababka hawlgalka badbaadada ee ballamaha
Si loo ilaaliyo caafimaadka iyo ladnaanta dhammaan macaamiisha iyo shaqaalaha, hab -maamuusyada nadaafadda ee adag ayaa ka jiri doona Xarumaheenna Adeegga Macmiilka (Customer Service Centres).
Qofna ma aha inuu ka soo qaybgalo ballanka haddii aanu xanuunsanayn.
Ogolaanshahaaga barashada (learner permit) ama caddaynta aqoonsiga.
Liisankaagii asalka ahaa ee dibadda (haddii ay khuseyso).
Turjumid Af-Ingiriisigi ah ee liisankaaga ama oggolaanshaha wadista caalamiga oo ay NAATI ansixisey (kaliya ayaa loo baahan yahay haddii liisankaaga dibedda uusan ku qornayn Af-Ingiriis).
Qaado imtixaanka khatarta la aaminsanyahey ee baraaktiska ah.
Caddayntaadii hore ee aqoonsiga.
Baabuur ku habboon
Muraayadahaaga araga ama kontagti indhaha (haddii aad u baahan tahay inay ka gudbaan imtixaanka aragga oo dhammaystiraan imtixaanka wadista)
Buuggaaga diiwaangelinta wadistaada oo dhammaystiran ama aad ku dhammaysay saacadahaaga barnaamijkaMyLearners haddii aadan ahayn (External link)
Akhri dulahaan liiska imtixaanka Darawalnimada Driver Test checklist.
Noocyada dhukmentiyada aqoonsiga
Waxaa laga yaabaa inaad u baahatid inaad keentid caddaynta aqoonsigaaga markaad diiwaangelinaysid baabuurka ama aad qaadanaysid liisankaaga.
Si aqoonsigaaga loo xaqiijiyo waa inaad tagtaa Xarunta Adeegga Macmiilka (Customer Service Centre) qof ahaan.
La'aanta dhukumentiyada saxda ah ma awoodi doontid inaad buuxiso codsigaaga.
Waa maxay waraaqaha aqoonsiga ee aan u baahanahay?
Waxa ugu badan ee aad u baahan tahay inaad ku siiso codsi kasta waa:
hal dhukumintiga caddaynta Qaybta A (caddaynta jiritaanka iyo xidhiidhka ka dhexeeya aqoonsiga iyo codsadaha. tusaale baasaboor ama shahaadada dhalashada Australia oo dhammaystiran - asal ahaan, ma aha koobi ama nuqullo la xaqiijiyay)
hal dhukumenti caddayn oo ah Qaybta B (caddaynta isticmaalka aqoonsigaas ee bulshada dhexdeeda. tusaale Medicare ama kaadhka bangiga)
caddaynta degenaanshaha Fiktooriya (haddii cinwaankaaga aan lagu muujin dhukumintiga A ama Qaybta B)
caddaynta beddelka magaca (haddii magacaagu ku kala duwan yahay Dhukumentiyada Qaybta A iyo Qaybta B).
Bixinta macluumaad ama dhukumiintiyo been abuur ah iyo/ama marin habaabin ah waa dembi culus sida uu dhigayo Sharciga Badbaadada Wadada (Road Safety Act 1986) iyo/ama Xeerka Badbaadada Badda (Marine Safety Act 2010) waxayna keeni kartaa in lagu ganaaxo ama lagu xidho.
Awood kasta ama oggolaansho, oo lagu bixiyay adiga oo bixinaya macluumaadka/dhukumiintiyadaas, waa la beddeli karaa oo wax saamayn ah ma yeelan doonto.
Waraaqaha aqoonsiga ee la aqbalay
Magaca ku yaal dhukumentiyadaada A iyo Qaybta B waxay u baahan yihiin inay si buuxda u muujiyaan magaca qoyskaaga iyo magacaaga koowaad iyadoo si iskumid ah isugu xiga.
Haddii aad haysatid wax ka badan hal magac (la bixiyay) magaca hore waa inuu ka muuqdaa labada dhukumentiba.
Haddii aad leedahay mid ka badan hal ee magaca awowaga (magac awowga) dhammaan magacyadu waa inay ku muuqdaan labada dhukumentiyada.
Wakiil u noqoshada qof kale ama shirkad
Si aad u diiwaangelisid baabuur adiga oo wakiil ka ah qof kale waxaad u baahan doontaa Hay'ad saxeexan oo ku shaqaysa foomka Wakiilka [Authority to Act as an Agent form [PDF 253 Kb] (External link).
Tag Diiwaangelinta adiga oo wakiil ka ah qof kale (External link) si aad u heshid macluumaad dheeraad ah.
Dhukumentiyada Qaybta A waxay u baahan yihiin inay muujiyaan magaca qoyskaaga, magacaaga kowaad iyo taariikhda dhalashadaada.
Dhukumiintiyadu waxay u baahan yihiin inay ahaadaan kuwo jira ama dhacay wax ka badan laba sano.
Dhukumiintiyada A la aqbali karo
Ruqsadda darawalnimada sawirka Australia ama kaarka sawir ee oggolaanshaha bartaha (learner permit).
Kaadhka sawirka liisanka badda ee Fiktooriya.
Kaadhka sawirka liisanka hubka ee Fiktooriya.
Kaadhka sawir ee Ilaaliyaha Badbaadada Fiktooriya/Crowd Controller.
Baasaboor dibadeed (Haddii uu dhacay wax ka badan laba sano waa la aqbali karaa haddii uu la socdo fiisaha Australiya ee hadda jira.
Shahaadada aqoonsiga ee uu bixiyo Passport Office.
Dhukumentiga socdaalka ee heshiiska ee uu bixiyay Passport Office.
Dhukumentiga aqoonsiga ee uu bixiyay Passport Office (badanaa la siiyo dadka socotada ah ee Noorfolk Island).
Kaadhka aqoonsiga sawirka sarkaalka ciidanka booliska Australiya.
Kaarka aqoonsiga sawirka qunsuliyadda oo ay soo saartay Waaxda Arrimaha Dibadda iyo Ganacsiga (Department of Foreign Affairs and Trade).
Shahaadada dhalashada Australiya oo buuxda oo ay bixisay Diiwaanka Dhalashada (Births), Dhimashada (Deaths) iyo Guurka (Marriages) (Xusuusin: soo -saaridda dhalashada iyo shahaadooyinka dhalashada Xusuusta lama aqbalo).
Dhalashada Australiya ama shahaadada dhalashada, ama Dhukumentiga Socdaalka Australiya ama ImmiCard (ilaa 2 sano ayaa dhacay), oo ay soo saartay Department of Immigration and Citizenship ama Passport Office.
Kaadhka Sawirka NSW (oo ay soo saartay NSW RMS wixii ka dambeeyay 14 Disember 2008).
Kaadhka dhalashada (oo ay soo saartay NSW RMS kahor Ogosto 2008).
Fadlan ogow: Bixinta macluumaad ama dhukumiintiyo been abuur ah iyo/ama marin habaabin ah waa dembi culus sida uu dhigayo Sharciga Badbaadada (Road Safety Act) Wadada 1986 iyo/ama Xeerka Badbaadada Badda (Marine Safety Act 2010) waxayna keeni kartaa in lagu ganaaxo ama lagu xidho.
Dhukumentiyada Qaybta B
Mid ka mid ah dhukumiintiyada soo socda ee hadda jira.
Kaadhka Aqoonsiga sawirka shaqaalaha ee gobolka ama dowladda dhexe.
Kaadhka Pensioner Concession card.
Kaadhka xaq u lahaanshaha ee hadda jira oo ay soo saartay Commonwealth.
Kaadhka aqoonsiga ardayga.
Kaadhka amaahda ee Australiya ama dibedda ama kaarka koontada ee bangiga, bulshada dhismaha ama ururada deynta.
La shaqaynta kaadhka Hubinta Carruurta (Working with Children Check card).
Kaadhka Caddaynta Australia.
Kaadhka furaha Australia (Australian Keypass card).
Kaadhka aqoonsiga sawir ee Australian Defence Force (marka laga reebo shaqaalaha rayidka ah).
Mid ka mid ah dhukumiintiyadan oo aan dhaafin hal sano (bayaannada elektiroonigga ah ee aaladda (tusaale ahaan taleefanka gacanta ama kiniiniga) iyo bayaannada daabacan ee Internetka waa la aqbali karaa):
buug -baasaboor ama bayaan xisaabeed bangi oo muujinaya hay'adaha xarfaha ama shaambadda
biilka taleefoonka, gaaska ama korontada oo muujinaya hay'adaha xarafka ama shaabad
waraaqaha ATO, Centrelink, Bangiga iyo Medicare oo muujinaya hay'adaha xaraf ama shaabad.
Mid ka mid ah dhukumiintiyadan oo aan ka badnayn laba sano:
qiimaha biyaha, qiimaynta degaanka (council rates) ama ogeysiiska qiimaynta dhulka
kaarka diiwaangelinta doorashada ama caddeyn kale oo isdiiwaangelin ah
Warqadaha siideynta militariga
Adeegyada hubaysan waraaqaha siidaynta kaarka aqoonsiga sawir ee Maamulka Wadista Fiktooriya ee hadda Victorian Driving Authority.
Dukumentiyada Qaybta C - Isbedelka cinwaanka
Waxaad u baahan doontaa mid ka mid ah dukumiintiyada soo socda haddii cinwaankaaga Fiktooriya aan la tusin ama uu ka duwan yahay dukumentiyada caddaynta ee Qaybta A ama Qaybta B:
heshiiska iibka, heshiiska kirada, ama dhukumeentiga kirada oo muujinaya cinwaankaaga hadda
ogeysiiska cusboonaysiinta hadda ee liisanka darawalnimada ama diiwaangelinta baabuurka
Australian Taxation Office Assessment (sanad maaliyadeedkii u dambeeyay ama hadda)
dhukumentiga A ama Qaybta B oo ka duwan oo muujinaya cinwaankaaga hadda.
Haddii aadan weli caddayn karin degenaanshahaaga Fiktooriya, waa inaad keentaa bayaan garsoore oo ay tahay inuu:
inuu saxiixo qof haysta laysanka darawalnimada Fiktooriya oo ku yaqaan 12 bilood ama ka badan, waxaana ku jira magaca garsooraha, lambarka liisanka iyo saxiixa.
Qoraalkan waxaa lagu samayn karaa oggolaanshaha bartaha (learner permit) ama foomka codsiga liisanka.
Dhukumiintiyada Qaybta D - Isbeddelka magaca
Waxaad u baahan doontaa mid ka mid ah dukumiintiyada soo socda haddii magacaagu ku kala duwan yahay dukumentiyada caddaynta Qaybta A iyo Qaybta B.
Shahaadada guurka ee uu bixiyo Diiwaanhayaha Dhalashada, Dhimashada iyo Guurka Australiya (Births, Deaths and Marriages).
Waraaqaha furriinka (oo muujinaya magaca dib loogu celinayo).
Codbixinta Deed (oo la soo saaray kahor Nofeembar 1986 Victoria).
Beddelka magaca Shahaadada (Change of name Certificate) (oo la soo saaray iyo wixii ka dambeeyay Nofeembar 1986 Victoria).
Dhukumentiyada aqoonsiga ee
Haddii baabuur loo diiwaangeliyo (registered) Shirkad, mid ka mid ah kuwan soo socda ayaa loo baahan yahay:
Lambarka Shirkadda Australia (ACN) (Australian Company Number (ACN)
Markii la diiwaangeliyo (registered), shirkad kasta oo Australia ah waxay heshaa sagaal lambar oo gaar ah oo lagu garto lambarka Shirkadda Australia (Australian Company Number).
Lambarku waa inuu ka muuqdaa dukumenti kasta oo dadweyne oo la soo saaray, saxeexay ama daabacay, ama wakiil ka ah shirkadda* ama
Shahaadada Diiwaangelinta (Certificate of Registration)
Sidoo kale ACN, ASIC waxay soo saartaa shirkad kasta oo diiwaan (registered) gashan Shahaadada Diiwaangelinta (Certificate of Registration), ama
Shahaadada Inkooborashanka (Certificate of Incorporation).
Shahaadooyinkan waxaa laga yaabaa inuu bixiyo Diiwaanhayaha Inkooborashanka (Registrar of Incorporated Associations (External link)) oo ka jawaabaya codsiyada hay'adaha danaynaya ee buuxiya shuruudaha la qeexay.
* Lambarka Ganacsiga Australia ( Australian Business Number (ABN) wuu ka duwan yahay ACN.
ABN waa lambar kow iyo toban lambar ah oo loo adeegsado macaamilka ganacsi ee Xafiiska Canshuuraha Australia (Australian Taxation Office) iyo la macaamilka hay'adaha kale ee dawladda.
Shirkadaha diiwaangashan (Registered) iyo hay'adaha ganacsiga ee ka ganacsada Australia waxay codsan karaan ABN.
Xusuusnow: Lambarada Ganacsiga Australia (Australian Business Numbers (ABNs) ma aha caddayn la aqbali karo oo ah in jidhku yahay urur isku jira.
Si aad u matalayso shirkad
Waa inaad bixisaa:
caddaynta Qaybta A ama B ee dhukumintiga
aqoonsiga warqad asal ah oo amar ah oo ka socota agaasimaha shirkadda ama shirkad ku qoran shacaarka shirkada.
Waa inay ku jirtaa macluumaadka soo socda:
magaca shirkadda oo buuxa iyo cinwaanka ku qoran shacaarka shirkada
Lambarka Shirkadda Australia (Australian Company Number (ACN) ama Shahaadada Inkooboreeshan
magaca qofka ku shaqeeya magaca shirkadda
liiska waxqabadyada lagu samayn karo magaca shirkadda (tusaale, cusboonaysiinta diiwaangelinta).
Haya'd awood u leh inay matasho shirkada sida foomka Wakiilka Authority to Act as an Agent form [PDF 253 Kb] (External link) waa la aqbali karaa haddii shirkaddu aaney lahayn warqad shacaarka shirkada leh.
Waxqabadyada soo socda ma samayn karo wakiil matalaya shirkad:
iibso xusuus qor
shaqo sawir laga qaado
Ballan sameysiga (External link)
Saxiix myVicRoads (External link)
Booqo Xarunta Adeegga Macmiilka (Customer Service Centre) (External link)
Adeegyada internetka (External link)
Liisanka darawalnimada iyo khidmadaha oggolaanshaha
Adigoo isticmaalaya laysankaaga ama oggolaanshahaaga Victoria (External link)
Gal myVicRoads (External link)
Macluumaadka Coronavirus (External link)